မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကြုံခဲ့ဖူးသမျှ သူငယ်ချင်းများ (3)
လှိုငျးတဈပိုးထနျ... လကေိုဆနျလဲ... အပွုံးမပကျြ... ပနျးပနျလကျြ....
ကြုံခဲ့ဖူးသမျှ သူငယ်ချင်းများ (3)
အဲဒိအချိန်တုန်းက "ရေးပေးပါ"ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေ ခေတ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့.. အဲဒိစာအုပ်ထဲမှာ မေးခွန်းလေးတွေပါတယ် "ဘာအရောင်ကြိုက်လဲ.. NICK name ရှိလား.." စသည်ဖြင့် personal questions လေးတွေ အမူအကျင့်လေးတွေကို interview ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့.. မိန်းကလေးတော်တော်များများ မှာရှိပါတယ်.. ကျမမှာလဲရှိခဲ့ဖူးတယ်.. အဲဒိစာအုပ်ရဲ့ first3pages မှာ ကျမအခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း သူတို့ကို ရေးစေချင်ခဲ့တယ်.. ရေးလဲရေးခိုင်းခဲ့တယ်.. သူတို့ကအဲဒါမျိုးမရေးတတ်ဖူးလို့ ညင်းတယ်.. နောက်ဆုံး ကျမအရမ်းတောင်းဆိုလို့ မရေးချင်ရေးချင်နဲ့ ရေးပေးကြတယ်.. သူတို့ရှေ့မှာမဖတ်ရဘူးလို့ပြောတယ်.. ကျမလက်ခံခဲ့တယ်.. အဲဒိအချိန်တုန်းကတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ကျေနပ်ခဲ့တယ်.. သူတို့ကအဲဒါမျိုးတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး.. သူများတွေရေးခိုင်းလည်း မရေးတတ်လို့ပါဆိုပြီး ညင်းနေကြ.. ခုတော့ ကျမကိုရေးပေးတယ်ပေါ့..
ကျောင်းဆင်းခါနီးဖြစ်နေတော့ ကျောင်းကားတူတဲ့ SNOW ကို ကားပေါ်ရောက်မှပဲရေးခိုင်းခဲ့တယ်.. သူရေးပြီးတော့ ကျမလဲသိချင်လွန်းတာနဲ့ ချက်ချင်းဖတ်မိတယ်.. သူတို့၃ယောက်လုံးရေးထားတဲ့ ထဲမှာ "အမည်, လိပ်စာ"လောက်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့မေးခွန်းတော်တော်များများက "-" လေးတွေချထားတာတွေ့ရပါတယ်.. အဆိုးဆုံးက "Who is your best friend?" လို့ မေးထားတဲ့ questions လေးမှာလဲ ၃ယောက်လုံး "-" ထည့်ထားပါတယ်.. ကျမရင်ထဲမှာဆို့နင့်ရပါတယ်.. စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်တယ်.. သိလဲသိချင်တယ်.. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက စိတ်ထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေတယ်.. ဒါနဲ့လောလောဆယ်အနားမှာရှိတဲ့ SNOW ကိုကျမမေးလိုက်တယ်..
အေးဆေးစွာပဲ သူမပြန်ဖြေတယ်.. "ဘာရေးရမှန်းမသိလို့.."
ကျမပြန်မေးတယ်.. "နင့်မှာ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းမရှိဘူးလား?"
သူမ ခဏစဉ်းစား လိုက်ပြီး.. "အေး.. မရှိဘူး.."
ကျမ စိတ်ထဲမှာ ပြောချင်တာတွေအများကြီးပဲ.. ဒါပေမဲ့ ဘာတွေပြောချင်မှန်းလဲ သေချာမသိဘူး..
ဆို့နင့်နေတဲ့ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေရှိနေပေမဲ့ ကျမ ပါးစပ်အဟောင်းသားက ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးကတော့...
၃မိနစ်လောက် ကျမစိတ်ကို ညိမ်အောင်ပြန်ထိမ်းလိုက်ပြီး....
"နင့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ငါတို့မဟုတ်ဘူးလား?"
"ဟင့်အင်း......" သူမပြန်ဖြေလိုက်သည့်ပုံက ကျမကိုနာကျင်စေတဲ့ဆန္ဒလုံးဝမပါ.. ပုံမှန်စကားပြောတစ်ခုကဲ့သို့ပင်.. သူ့စိတ်ထဲရှိတာကိုဖြေခြင်းသာဖြစ်သည်.. ကျမစိတ်ထိခိုက်သွားသည်ကိုပင် သိပုံမပေါ်.. ကျန်တဲ့ ၂ယောက်လဲ သူမအတိုင်းတွေး၍သာ အဖြေတူခြင်းဖြစ်မည်.. ကျမထပ်မေးစရာမလို.. ကျမကိုဘယ်သူက ဘယ်အချိန်မေးမေး ကျမမှာအချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ၄ယောက်ရှိတယ်လို့ မဆိုင်းမတွ ဖြေခဲ့တဲ့ ကျမ.. .. ကျမ မိသားစုက နင့်သူငယ်ချင်းတွေကလဲ တမျိုးပဲ.. စကားလဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မပြောဘူး လို့ဝေဖန်တိုင်း.. သူတို့က အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကာပြောခဲ့တဲ့ ကျမ ..... ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမည်နည်း?.. အမှန်တိုင်းပြောတဲ့ သူတို့ကိုလား? ရေးခိုင်းမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လား? ...
နောက်ဆုံး ကျမရဲ့ဒေါသနဲ့အပြစ်တင်မှုအားလုံးကတော့.. သတ်မဲ့ထိုစာအုပ်ပေါ်သို့.. ဒေါသထွက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကျမရဲ့ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းအကျင့်အတိုင်း.. ကျမစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို ရစရာမရှိအောင် ဖြဲဆုတ်ပစ်လိုက်တယ်... ကျမပါးစပ်မှလဲ "ဟုတ်တယ်.. အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမရှိဘူး.. ငါ့မှာလဲမရှိဘူး.. အားလုံးကောင်းတယ်" ဆိုပြီးဘာတွေပြောလို့ပြောမိမှန်း မသိ... ဒီတော့ ဒေါသကြီးပြီး ဝုန်းဒိုင်းလုပ်မိတဲ့သူက အများအမြင်မှာအလွန်.....
အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ ရည်းစားပြစ်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. ခင်မင်မှုကို ဥပက္ခာပြုခံရတဲ့ အခါမျိုးမှာလဲရှိတတ်ပါတယ်....
ဆက်ရန်........ (မကြာမီ လာမည်.. မျှော်....)
Posted by mabaydar at 11:22 AM
အင်း .. မဗေဒါ သူငယ်ချင်းတွေက တကယ် တမျိုးတော့ တမျိုးပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းကောင်းတယောက်နဲ့တော့ မဗေဒါ ဘ၀မှာ ဆုံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
11/25/2007 12:48 PM
ယနရေ့ောကျလာ မိတျသဟာ ခမျြးသာကိုယျစိတျမွဲပါစေ
One of the pioneer Myanmar Blogger since 2006. Have written mostly about Movie & dramas review & recommendation, Travel review with videos and photos & others personal experience about life in Singapore. So if you are interested in Dramas and Movies, or Travelling, Let's talk about them here with me... :D
ကိုယျဝနျ ၃လအောကျ မိခငျလောငျးမြားအတှကျ ခရီးသှားခွငျး
၂၀၁၆ မလေက မဗဒေါရဲ့ ဂရိခရီးစဉျမှာ မပွငျနိုငျမဆငျနိုငျနဲ့ မလှမပ မဗဒေါကို မလှဘူးလို့ အားပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ (ကွညျ့ရတာ မလှတဲ့သူတှေ ...
ဤဘလော့သညျ မဗဒေါ၏ ဝါသနာအရ ရေးသားသော ဘလော့ဖွဈပွီး... မဗဒေါ စိတျဝငျစားသော အကွောငျးမြား... မဗဒေါ၏ ထငျမွငျခကျြမြား... မဗဒေါ၏ ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံမြား... ကိုယျပိုငျ ခရီးသှားမှတျတမျးမြား ကို ရေးသားထားသောနရောဖွဈသဖွငျ့...
လာရောကျသူမြားအနဖွေငျ့ သငျ့အတှကျ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျး လြှငျသျောလညျးကောငျး... သငျ့ အတှကျ အကြိုးရှိမညျထငျလြှငျသျောလညျးကောငျး ဖတျရှူနိုငျပါတယျ... ထိုသို့မထငျလြှငျ မဖတျလြှငျသျောလညျးကောငျး... နောငျလာခငျြစိတျပါမရှိလောကျအောငျ အသုံမကဟြုထငျလြှငျသျောလညျးကောငျး လှတျလပျစှာ ထှကျခှာသှားနိုငျပါတယျ...
အမွငျကှဲလှဲလြှငျသျောလညျးကောငျး.. မဗဒေါပေးထားသော သတငျးမြားမှားယှငျးလြှငျသျောလညျးကောငျး ကောငျးမှနျစှာ ဆှေးနှေးအကွံပွုနိုငျပါတယျ...
တကျတကျစငျအောငျ မှားနသေောစာလုံးပေါငျးမြားမှအပ ကနျြတာမြားကို နားလညျစှာ သညျးခံဖတျရှုပေးစလေိုပါတယျ... ပွငျဆငျပေးလိုလြှငျ မှားနသေောစာလုံးပေါငျးနှငျ့ အမှနျကို ပွငျဆငျပေးကွပါ... အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ....
မြန်မာရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းသို့ အလည်တစ်ခေါက်...
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အလုပ်မရှိလို့ အပြင်သွားချင်နေတုန်း သူငယ်ချင်း SZA က သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ ဟိန်းဝေယံ သက်မွန်မြင့် ချောရတနာတို့ ...
မြန်မာ သရဲမ ပါတဲ့ Thai Horror Movie - Laddaland
ယိုဒယားတွေဟာ သရဲကားထုတ်လုပ် ရိုက်ကူးရာမှာ hollywood ထက်ပင် ကြောက်စရာ ကောင်းအောင်ရိုက်တတ်တယ်လို့ ကျွန်မအတွက်တော့ သတ်မှတ်ယူဆတယ်... ကျွန်မအတွက...
Park Yong Ha ရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီး...
စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဝေမျှရတာ မကောင်းပါဘူး... ဒါပေမဲ့ မဝေမျှပဲလဲ မနေနိုင်ဘူး... ဒီနေ့ပဲ Park Yong Ha ကို အသုဘချပါတယ်... သူ့ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ြ...
သငျမသိကောငျး မသိသေးမဲ့ Park Bo Gum အကွောငျးလေးတှေ
Park Bo Gum ကိုယျရေးအကွောငျးတှေ မှေးနတှေ့ေ သှေးအမြိုးအစားတှေ ဘာတှတေော့ ထှထေူးရေးမနတေော့ပါဘူး။ တခွား Facebook page တှကေလဲ တျောတျောလေး ရ...
ဒီပိုစ့်ကိုတော့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဖွင့်ချင်ပါတယ်... သင်တို့တွေ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအများစု အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာကိုကြားတဲ့အခါ ဒါဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့...
Kang Ji-Hwan movie "Detective Cha"
မင်းသား Kang Ji-Hwan အကြောင်းတောင်းဆိုလာတဲ့ Su အတွက် သတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်… သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ် “Detective Cha” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် (ဇာတ်လမ်း...
SungKyunKwan Big Man မင်းသမီး Park Min Young နှင့် အင်တာဗျူး...
မင်းသမီးအကြောင်း တောင်းဆိုသူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီး အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုကို ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်... SungKyunKwan Scandal ထဲက Ki...
Who is she? (သူဘယျသူလဲ?)
စင်ျကာပူရဲ့ တရုတျ တစ်ဆကွေီးပှဲလ အတှကျ ကိုယျတှစေိ့တျနယျလှနျ ဖွဈရပျဆနျးလေးအကွောငျးရေးခငျြမိပါတယျ။ စာဖတျသူတှထေဲက သရဲကွောကျတတျတဲ့ သူတှကေို မေး...
After he's left.... (Park Yong Ha)
ဒါကတော့ 07/06/2010 တုန်းကမှ Park Yong Ha ရဲ့ Volunteer အလုပ်ပါ... ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်မလဲတော့ မသိပါဘူး... Haiti ဖြစ်မလားဘာလားတော့ မသိပါဘူး... ကိ...
လတ်တလောမှာတော့ လီမင်ဟိုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှာဖွေမိသလောက် ထူးထူးခြားခြား သတင်းမရှိသေးပါဘူး... Personal Taste ဇာတ်ကားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်နေ့က ရို...
မိန်းကလေးတွေကို ချဉ်းကပ်နည်း (ရှောင်ကျဉ်ရန်)
ကြုံခဲ့ဖူးသမျှ သူငယ်ချင်းများ (၂)
အဆုံးမဲ့...
ရမ်ဘို ၄ : ငရဲစခန်းသို့ အသွားအပြန်
မွနျမာဖောငျ့မရှိတဲ့ ဘယျကပဲဖွဈဖွဈ.. မွနျမာဖောငျ့လကျကှကျမသိရငျပဲဖွဈဖွဈ.. ဒီနရောမှာ.. ဘားကလဈ.. မောကျဈကလဈနှိပျရိုကျရိုကျ.. သှားကွညျ့လိုကျသိမယျ.. အဲဒိမှာ မွနျမာလိုရိုကျလို့ရ၏
Gmail အကောငျ့ရှိရငျ Join ပေးပါနျော...
Subscribe Now: To မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး
Subscribe to မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး
လကျတလော ကိုရီးယားတှငျပွနသေော ဇာတျလမျးတှဲမြား
Woman WithaSuitcase (MBC)
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (SBS)
Drinking Solo (tvN)
On the Way to the Airport (KBS)
Shopping King Louis (MBC)
Jealousy Incarnate (SBS)
Laurel Tree Tailors (KBS)
Flower in Prison (MBC)
Our Gap-soon (SBS)
Second to Last Love (SBS)
The K2 (tvN)
၀တ္ထုတို (7)
Activities ( 48 )
Celebrities ( 60 )
Drama ( 39 )
Game (5)
General ( 42 )
Greece (Zakynthos) ( 1 )
Knowledge ( 21 )
Korea Trip (9)
Malacca ( 1 )
movie review ( 13 )
My Honeymoon ( 17 )
Myanmar Trip (3)
Our Wedding (6)
song (7)
Star in town (5)
Tag (6)
Trash (4)
Travel Fashion ( 1 )
Travel Tips (5)
Video ( 42 )
Wedding Tips ( 1 )
ကဗျာ (3)
ကဗျာမကျ စာမကျ (2)
ကိုရီးယား-ရှန်ဟိုင်းခရီးစဉ် ( 16 )
ခရီးသွားမှတ်တမ်း ( 83 )
ဂျပန်ခရီးစဉ် ( 10 )
စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ ( 15 )
ဓာတ်ပုံ ( 12 )
မင်းသမီး ( 8 )
မင်းသား ( 23 )
မုန်တိုင်း ( 15 )
ဖြစ်ရပ်ဆန်း ( 1 )
မြန်မာ (3)
ရုပ်ရှင် ( 19 )
သူငယ်ချင်းများ ( 19 )
အခန်းဆက် ၀တ္တု ( 10 )
အတုလ (4)
ဆောင်းပါး (5)
ဗေဒါ့အကြောင်း ( 55 )
ဝေဖန်ရေး ( 42 )
ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ် (9)
My favorite couple on screen
Secret Garden (k-Drama)
Another home on Net
www.mabaydar.blogspot.com. Theme images by kickers. Powered by Blogger.